ထရမ့်-ကင် သမိုင်းဝင် ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ - BBC News မြန်မာ
ထရမ့်-ကင် သမိုင်းဝင် ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ
၁၁ ဇွန် ၂၀၁၈၁၁ ဇွန် ၂၀၁၈
ဇွန် ၁၂ ရက်နေ့မှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံ စင်တိုဆာကျွန်းပေါ်က ကြယ်ငါးပွင့် အဆင့် ရှိတဲ့ ကပဲလား ဟိုတယ်မှာ မစ္စတာ ထရမ့်နဲ့ မစ္စတာ ကင်ဂျုံအွန်းတို့ တွေ့ဆုံနေကြပါပြီ။ ဒါဟာ လက်ရှိ သမ္မတ ရာထူး တာဝန် ထမ်းဆောင်နေတဲ့ အမေရိကန် သမ္မတတစ်ယောက်က မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်နဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထရမ့်-ကင် သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ရေးထိုး
နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ဖို့ကိုလည်း သဘောတူညီခဲ့ကြ
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ သဘောတူညီမှု လို့ ထရမ့် က ပြောဆို
အတိတ် ကို ထားခဲ့ပြီး အဓိက အပြောင်းအလဲတွေ မြင်တွေ့ရမယ်လို့ ကင် က ပြော
နျူကလီးယား ကင်းစင်ရေး ဆောင်ရွက်မယ်လို့ သဘောတူညီ
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 13:53 ၁၂ ဇွန်
အမေရိကန်သမ္မတ ထရမ့်နဲ့မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအွန်းတို့ စင်္ကာပူမှာတွေ့ဆုံကြတော့မှာပါ။ ဒီလို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့တွေ ဖြစ်မလာခင်မှာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ လောက် တင်းမာ မှုတွေ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနိုင်ငံတွေအကြား စစ်ပွဲကြီးလဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးသလို နောက်ပိုင်းမှာလည်း ဆက်ဆံရေး တွေက သိပ်ပြီး ပြေလည်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဘီဘီစီရဲ့မှတ်တမ်း တွေထဲက သူတို့နှစ်နိုင်ငံရဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေကို ပြန်ရှုစားရအောင်ပါ။ ကိုမိုးမြင့်က ပြောပြမှာပါ။
မျှဝေဖို့ ရွေးရန် Facebook
မျှဝေဖို့ ရွေးရန် Twitter
လင့်ခ်တွေအကြောင်း ထပ်ဖတ်ရန်Read more about sharing BBC content externally
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 13:34 ၁၂ ဇွန်
အမေရိကန်၊ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား တို ရဲ့ ဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေနေတဲ့ အချိန်မှာ ပြုံယမ်း ကို ပြန်ချင် နေကြတဲ့ လူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အဲဒီလူတွေကတော့ တောင်ကိုရီးယား အတွက် သူသျှို လုပ်ပေးခဲ့ကြသူတွေ လို့ စွပ်စွဲ ခံခဲ့ရပြီး မြောက်ကိုရီးယား ကနေ ထွက်ပြေး ခဲ့ကြရသူတွေပါ။
ကင်ယုံစစ် ဟာ တောင်ကိုရီးယား ကို ရောက်နေတာ ၁၉ နှစ်ကျော် ရှိနေပါပြီ။ အခွင့်အရေး ရရင် အမိမြေကို ပြန်ချင်တယ်လို့ သူက ပြော ကြားခဲ့ပါတယ်။
ကင်ယုံစစ် ဟာ တောင်ကိုရီးယား ကို ရောက်နေတာ ၁၉ နှစ်ကျော် ရှိနေပါပြီ
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 13:25 ၁၂ ဇွန်
ထရမ့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲက အဓိက အချက်(၅)ချက်
၁။ မြောက်ကိုရီးယား အကျဉ်းသား တွေက ဆွေးနွေးပွဲ ရလဒ်ရဲ့ အကျိုး အရှိဆုံးသူတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ဒေါ်နယ် ထရမ့် က ပြောဆိုသွားခဲ့။
၂။ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ ပူးတွဲ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု က မြောက်ကိုရီးယားကို ရန်စသလို ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ သူ့ အနေနဲ့ ယူဆကြောင်း၊ ဒါတွေကို ရပ်တန့် လိုက်ခြင်း အားဖြင့် ပိုက်ဆံ အကုန်အကျလည်း သက်သာစေမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သူက ပြောဆိုခဲ့။
၃။ ကင်ဂျုံအွန်း နဲ့ ဆွေးနွေးစဉ် မှတ်တမ်း မှတ်ရာ စာအုပ် မကြည့်ဘူးလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်း ကိုတော့ သူ့ ဦးနှောက်က အလွန်ကောင်းတဲ့ အတွက် ဒါတွေ မလိုဘူးလို့ ပြောဆိုခဲ့။
၄။ သဘောတူညီချက်တွေက အစီအစဉ် တကျ မဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း သူ့ရဲ့ အမှားအယွင်း ကြောင့်သာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း တောင်းပန် စကားဆိုခဲ့။
၅။ အလုံးစုံ နျူကလီးယား ကင်းစင်ဖို့ ၁၅ နှစ်ကြာ အချိန်ယူ ရမယ်ဆို တဲ့ ကျွမ်းကျင်သူ တွေရဲ့ ပြောကြားချက် ကိုလည်း မှားယွင်းတယ်လို့ သူက ပြောဆို သွားခဲ့။
ပူးတွဲ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု က မြောက်ကိုရီးယားကို ရန်စသလို ဖြစ်
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 12:56 ၁၂ ဇွန်
စင်္ကာပူ နိုင်ငံ ကနေ ဒေါ်နယ် ထရမ့် ထွက်ခွာ
မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ လာရောက်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရမ့် ဟာ စင်္ကာပူ နိုင်ငံကနေ ပြန်လည်ထွက်ခွာ သွားခဲ့ပါပြီ။
ပါရာ လာဗာ လေတပ် စစ်အခြေစိုက် စခန်း မှာ ရပ်နား ထားတဲ့ အဲယားဖို့ဒ် ဝမ်း လေယာဉ် နဲ့ပဲ ပြန်လည် ထွက်ခွာ သွားခဲ့တာပါ။
စင်္ကာပူ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ အောင်မြင်တယ်လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။ ဒီ သမိုင်းဝင်တဲ့ ဖြစ်ရပ် ကို ဘယ်တော့မှ မေ့နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း သူက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 12:23 ၁၂ ဇွန်
စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ရပ်တာက အကြီးအကျယ် လိုက်လျောမှု
တောင်ကိုရီးယား နဲ့ ပူးတွဲ စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှုက မြောက်ကိုရီးယား ကို ရန်စ သလို ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ ဒေါ်နယ် ထရမ့် က ထုတ်ဖော် ပြောဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကိုရီးယား ကျွန်းဆွယ်က အမေရိကန် စစ်သား သုံးသောင်း နှစ်ထောင် ကို အိမ်ပြန်ခေါ်ချင်တယ်လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။ ဒီလို ရန်စ တယ်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း က အရင်တုန်း က မြောက်ကိုရီးယား တို့ ပြောလေ့ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ စကား အသုံးအနှုန်းပါ။
အရင်တုန်း ကတော့ ဒီလို စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှုတွေက ခုခံ ကာကွယ်ဖို့ အတွက် စစ်ရေး လေ့ကျင့်တာပါလို့ တောင်ကိုရီးယား နဲ့ အမေရိကန်တို့ က အစဉ်တစိုက် သုံးစွဲ ခဲ့တာပါ။ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကို ရပ်မယ်ဆိုတဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် က မြောက်ကိုရီးယား ကို အကြီးအကျယ် လိုက်လျော တာလို့ လေ့လာသူတွေက သုံးသပ်ပါတယ်။
အကယ်၍ အမေရိကန် အနေနဲ့ အနာဂတ်မှာ စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှုတွေ လုပ်လာမယ် ဆိုရင်တော့ မစ္စတာထရမ့် ရဲ့ ရပ်တည်မှု က ခက်ခက်ခဲခဲ ဖြစ်တော့မှာ ဆိုပြီးတော့လည်း ဝေဖန် နေကြပါတယ်။
ပူးတွဲ စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှုက မြောက်ကိုရီးယား ကို ရန်စ သလို ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ ဒေါ်နယ် ထရမ့် က ပြောဆို
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 11:34 ၁၂ ဇွန်
တွေ့ဆုံပွဲ သဘောတူညီချက် ကန် နိုင်ငံခြားရေး ထုတ်ပြန်
၁။ နှစ်နိုင်ငံ ကြား ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ဖို့ ခေါင်းဆောင် နှစ်ယောက် က ကတိပြု သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ပါတယ်။
၂။ ကိုရီးယား ကျွန်းဆွယ်မှာ ခိုင်မာတည်တံ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုမှာ ထဲထဲဝင်ဝင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်း သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။
၃။ အထက်ပါ အချက်တွေ အပြင် ကိုရီးယား ကျွန်းဆွယ်မှာ အလုံးစုံ နျူကလီးယား ကင်းစင်ရေ အတွက် ဆောင်ရွက်ဖို့ မြောက်ကိုရီးယား က ကတိပြု ပြောဆို ခဲ့ပါတယ်။
၄။ နောက်ပြီး စစ်ပွဲ အတွင်းမှာ ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့တဲ့ အကျဉ်းသားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ကိုလည်း နှစ်ဘက်စလုံးက သဘောတူညီ ခဲ့ပါတယ်။
1. US & DPRK commit to establish new relations 2. US & DPRK will join efforts to build lasting & stable peace on Ko… twitter.com/i/web/status/1…
10:07 a.m. - 12 June 2018
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 9:47 ၁၂ ဇွန်
မြောက်ကိုရီးယား မှာ ကျန်နေသေးတဲ့ အမေရိကန် စစ်သားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ကင်ဂျုံအွန်း ကို ဖျောင်းဖျ နိုင်ခဲ့တယ်လို့ သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရမ့် က ပြောပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ အကြောင်းကိုလည်း အတိုချုပ် ဆွေးနွေး ခဲ့တယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံဟာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ရှိပြီး နိုင်ငံသားတွေ အပေါ် အကြမ်းပတမ်း ဆက်ဆံမှုတွေ ကို သတိထား မိရဲ့လား လို့ သတင်းထောက် တွေက မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီမေးခွန်း ကိုတော့ လက်ရှိ ဆွေးနွေးပွဲ က နျူကလီးယား လက်နက် ဖျက်သိမ်းရေး ကို အဓိက ထား ဆွေးနွေး ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူ့ အနေနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ ကိုလည်း သတိထား မိပါတယ်လို့ ပြန်လည် ဖြေကြားပါတယ်။
လက်တလောမှာတော့ အမေရိကန် ရဲ့ ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေကို ဖယ်ရှားမှာ မဟုတ်ဘဲ၊ တောင်ကိုရီးယား နဲ့ လုပ်ခဲ့တဲ့ ပူးတွဲ စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှုတွေကိုတော့ ရပ်ဆိုင်းမယ်လို့ သူက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယား နဲ့ စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှုတွေရပ်မယ်။
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 9:18 ၁၂ ဇွန်
ဒေါ်နယ် ထရမ့် ရဲ့ စိတ်တက်ကြွမှု
မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆာင် ကင်ဂျုံအွန်း နဲ့ တွေ့ဆုံ ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို ဒေါ်နယ် ထရမ့် က သူ့ရဲ့ လူမှု ကွန်ရက် twitter မှာ ဖော်ပြ ခဲ့ပါတယ်။
သူတင်ခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးပို့စ် ထဲမှာ လုံခြုံရေး အစောင့်အရှောက်နဲ့ ရောက်လာတာ၊ မစ္စတာ ကင် နဲ့ အတူ လမ်းလျှောက်ခဲ့တာ၊ လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ခဲ့တာတွေ အပြင်၊ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ ရုပ်သံတွေကို တက်တက်ကြွကြွ ဖြစ်စေတဲ့ တေးသွား ဂီတ နဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး တင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကင်ဂျုံအွန်း နဲ့ တွေ့ဆုံမှု ကနေပြီး ရလာတဲ့ ရလဒ်တွေကြောင့် မစ္စတာထရမ့် တစ်ယောက် ဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ယူနေတယ်လို့ ယူဆ ရကြောင်း နိုင်ငံရေး လေ့လာသူတွေက သုံးသပ်ပါတယ်။
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 9:06 ၁၂ ဇွန်
‘တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ် သမ္မတကြီး’ ဆိုပြီးတော့ ဒေါ်နယ် ထရမ့် နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်မှာ ကင်ဂျုံအွန်း က ပြောဆို ခဲ့တာပါ။
နှစ်ယောက် စလုံးက တစ်ယောက်လက် တစ်ယောက် တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ပြီး လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက် ခဲ့ကြတာပါ။
ဒါပေမယ့် အရင်တုန်း ကလို ခပ်ကြကြာ ဆွဲကိုင် ပြီး နှုတ်ဆက်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ မစ္စတာ ထရမ့် ရဲ့ လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်မှု က စက္ကန့်ပိုင်းသာ ကြာခဲ့ပါတယ်။
မစ္စတာ ကင်ဂျုံအွန်း အနေနဲ့ကလည်း တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ မွန်ဂျေအင်း နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်ကလို မြောက်ကိုရီးယား နယ်မြေထဲကို ဆွဲခေါ်သွားခဲ့သလို ဟန်ပန်မူရာတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
ဟန်ပန်မူရာတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း မရှိ
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 8:37 ၁၂ ဇွန်
ထရမ့် - ကင် တွေ့ဆုံပွဲ မြောက်ကိုရီးယား သတင်း မထုတ်ပြန်
မြောက်ကိုရီးယား သတင်းဌာန ဖြစ်တဲ့ ကိုရီးယား စင်ထရယ် တယ်လီဗေးရှင်း (KCTV) ဌာန က ဒေသစံတော်ချိန် ၃ နာရီမှာ သတင်း ထုတ်လွှင့်မှု တွေ စတင် လုပ်ဆောင် ခဲ့ပေမယ့် အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရမ့် နဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီး ကင်ဂျုံအွန်း တို့ တွေ့ဆုံမှု အကြောင်းကိုတော့ ထုတ်လွှင့်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
အမျိုးသား သီချင်းတွေ နဲ့ ထုတ်လွှင့်မှု တွေ စတင်ခဲ့ပြီး ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ်မှာ ခေါင်းဆောင်ကြီး ကင်ဂျုံအွန်းရဲ့ စင်္ကာပူ ညချမ်း မှာ သွားရောက် ကြည့်ရှု တာကို သတင်းကြေညာတဲ့ အမျိုးသမီး က ပြောဆိုခဲ့ပေမယ့် ဓါတ်ပုံ၊ ရုပ်သံ တွေနဲ့ ထုတ်လွှင့်တာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာန တွေကတော့ သမ္မတ ထရမ့်နဲ့ ကင်ဂျုံအွန်းတို့ ဆွေးနွေးပွဲ အကြောင်းကိုတော့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖော်ပြ ကြပါတယ်။
ကင်ဂျံအွန်း အနေနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် တာဝန် ထမ်း ဆောင် စဉ် ခြောက်နှစ်အတွင်းမှာ နိုင်ငံပြင်ပ ကို ခရီးသွားလာခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါကလည်း သူမရှိရင် အာဏာ သိမ်းပွဲ ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်တာကြောင့် လို့ လေ့လာသူတွေက သုံးသပ်ပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာတော့ ကင်ဂျုံအွန်း က နိုင်ငံရပ်ခြား ခရီးသွားလာမှုတွေ လုပ်ဆောင် ခဲ့ပါတယ်။ သူက တရုတ် နိုင်ငံကို နှစ်ကြိမ်၊ နယ်စပ် က တောင်ကိုရီးယား နယ်နမိတ် ထဲကို ဖြတ်ကျော် ဝင်ရောက် ပြခဲ့တာ၊ ပြီးတော့ အခု စင်္ကာပူ ခရီးစဉ် နဲ့ ဆိုရင် နိုင်ငံရပ်ခြား ကို စုစုပေါင်း လေးကြိမ် ခရီး ထွက် ခဲ့ပါတယ်။
လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ထဲမှာ ရုရှ နိုင်ငံကို သွားရောက်ဖို့ ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း သတင်းတွေ ထွက်ပေါ် နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရမ့် ကလည်း အမေရိကန် ကို ဖိတ်ခေါ်ကောင်း ဖိတ်ခေါ် နိုင်တယ်လို့ ပြောဆို ထားပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ ထဲမှာ ရုရှ နိုင်ငံကို သွားရောက်ဖို့ ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 8:10 ၁၂ ဇွန်
နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး ထားရှိဖို့ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် အမေရိကန် - မြောက်ကိုရီးယား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ နှစ်ဘက် သဘောတူညီ ခဲ့ကြပါတယ်။
ကိုရီးယား ကျွန်းဆွယ်မှာ နျူကလီးယား ကင်းစင်ရေး အတွက် အတူတကွ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ဖို့ ဆိုတဲ့ အချက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့ က ထုတ်ပြန် ခဲ့တဲ့ ပန်မွန်ဂျွန် ကြေညာ ချက်ကို လိုက်နာပြီး ကိုရီးယား ကျွန်းဆွယ်မှာ နျူကလီးယား ကင်းစင်ရေး လုပ်ဆောင်ဖို့ မြောက်ကိုရီးယား က ကတိပြု ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စစ်အကျဉ်းသားတွေကို အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးရေးနဲ့ ကိုရီးယား စစ်ပွဲ အတွင်း က ကွဲကွာ နေတဲ့ မိသားစုတွေ ပြန်လည် ပေါင်းစည်းရေးဆောင်ရွက် ဖို့ ကိုလည်း မြောက်ကိုရီးယား တို့က ကတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
နျူကလီးယား ကင်းစင်ရေး စတင် လုပ်ဆောင်ဖို့ မြောက်ကိုရီးယား ကတိပြု
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 7:21 ၁၂ ဇွန်
ခေါင်းဆောင်တွေ ပြန်လည် ထွက်ခွာ
စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ ဆန်တိုစာ ကျွန်းပေါ်မှာ ဆွေးနွေးမှု တွေ လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရမ့် နဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအွန်း တို့ နှစ်ဉီးဟာ ကပဲလား ဟိုတယ် ကနေ ပြန်လည် ထွက်ခွာ သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ နှစ်ဉီးဟာ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးမှု လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ဘယ်အချက် တွေကို လက်မှတ် ရေးထိုး ခဲ့တာလဲ ဆိုတာ မသိရသေးပါဘူး။
မကြာခင်မှာ ထုတ်ပြန်မယ်လို့တော့ အိမ်ဖြူတော် ဘက် က ပြောကြားပါတယ်။
ခေါင်းဆောင် နှစ်ယောက်စလုံး ဆန်တိုစာ ကျွန်း ကနေ ရှေ့ဆင့် နောက်ဆင့် ထွက်ခွာ
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 7:12 ၁၂ ဇွန်
တရုတ် ကလည်း ချီးကျူး ဂုဏ်ပြု
သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရမ့် နဲ့ ကင်ဂျုံအွန်း တို့ နှစ်ယောက် ကို တရုတ် နိုင်ငံ ကလည်း ချီးကျူး ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ သမိုင်းတွင်တဲ့ ဖြစ်ရပ် လို့လည်း ဘေဂျင်း တာဝန် ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
ရန်စောင်မှု လုပ်ခဲ့သူတွေ အတူတကွ ထိုင်ပြီး ညီတူမျှတူ ဆွေးနွေး နိုင်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စက အင်မတန်မှ အရေးပါပြီး အကောင်းဘက်ကို ရှေ့ရှု နေကြောင်း တရုတ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဝမ်ယီ က ပြောပါတယ်။
ကိုရီးယား ကျွန်းဆွယ်မှာ နျူကလီးယား ကင်းစင် ရေး နဲ့ တင်းမာမှုတွေ လျော့ချ ရေး အတွက် အမြန်ဆုံး လုပ်ဆောင် ကြဖို့ကိုလည်း တရုတ် နိုင်ငံ တာဝန် ရှိသူတွေက ထပ်လောင်း တိုက်တွန်း သွားခဲ့ပါတယ်။
ဘာတွေ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ကြသလဲ ဆိုတာကိုတော့ အသေးစိတ် မထုတ်ပြန်သေး
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 6:58 ၁၂ ဇွန်
ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင် တွေက ရှောင်ကြဉ်ခဲ့ကြပြီး အထီးကျန် အဖြစ်ဆုံး နိုင်ငံ တစ်ခုနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေး စတင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ ဒေါ်နယ် ထရမ့် က ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။
မစ္စတာ ကင်ဂျံအွန်းဟာ အရည်အချင်း ရှိပြီး သူ့ရဲ့ နိုင်ငံကို အလွန် ချစ်မြတ်နိုးသူတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဒေါ်နယ် ထရမ့် က ချီးကျူး ပြောဆို ခဲ့ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယား ရဲ့ နျူးကလီးယား ဖျက်သိမ်းရေး လုပ်ဆောင်တော့မလား ဆိုတဲ့ မေးမြန်းမှုတွေကိုတော့ အဲဒီ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အမြန်ဆုံး စတင် လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ အိမ်ဖြူတော် ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူက ဆိုခဲ့ပါတယ်။
မစ္စတာ ကင်ဂျံအွန်းဟာ အရည်အချင်း ရှိပြီး သူ့ရဲ့ နိုင်ငံကို အလွန် ချစ်မြတ်နိုးသူတစ်ယောက် ဖြစ်
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 6:49 ၁၂ ဇွန်
သမိုင်းဝင် လက်မှတ် ရေးထိုး
ဒေါ်နယ် ထရမ့် နဲ့ ကင်ဂျုံအွန်း တို့ဟာ သဘောတူညီမှု ကို အတူတကွ လက်မှတ် ရေးထိုး ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ သဘောတူညီမှုကို လက်မှတ်ရေးထိုးတာ လို့ ဒေါ်နယ် ထရမ့် က ပြောပါတယ်။
အတိတ် ဖြစ်ရပ် တွေကို ထားခဲ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး ကမ္ဘာကြီးအနေနဲ့ အဓိက ကျတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို မြင်တွေ့ရမယ်လို့ ကင်ဂျုံအွန်း က စကားပြန် ကနေ တဆင့် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ သဘောတူညီမှုကို လက်မှတ်ရေးထိုး
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 6:42 ၁၂ ဇွန်
တောင်ကိုရီးယား ဘက် က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ဝင်ရောက် လာမှာ ကို မျှော်မှန်းပြီး ဈေးတွေ တက်ကုန် တာ ဖြစ်
မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအွန်း နဲ့ အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရမ့် တို့ ဘာတွေ သဘောတူညီမှု ရပြီး လက်မှတ် ထိုးကြမလဲ ဆိုတာ ကိုတော့ အခုချိန်မှာ မသိရသေးပါဘူး။
ဒါပေမယ့် သေချာတာ တခုကတော့ တောင်နဲ့ မြောက် ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ် က အိမ်ခြံမြေ ဈေးနှုန်း တွေကတော့ တက်သွားခဲ့ ပါပြီ။
သဘောတူညီမှု ရရင် မြောက်ကိုရီးယား ဘက်ကို တောင်ကိုရီးယား ဘက် က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ဝင်ရောက် လာမှာ ကို မျှော်မှန်းပြီး ဈေးတွေ တက်ကုန် တာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဈေးကွက် လေ့လာသူတွေက ပြောပါတယ်။
အမေရိကန်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယားတို့ လက်မှတ်ရေးထိုးမယ့် စားပွဲ အဆင်သင့်
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 6:25 ၁၂ ဇွန်
ဒေါ်နယ် ထရမ့် ရဲ့ ဘောပင် နေရာယူ
မကြာခင်မှာ ဒေါ်နယ် ထရမ့် နဲ့ ကင်ဂျုံအွန်း တို့ ဟာ သဘောတူညီမှုတွေကို လက်မှတ် ရေးထိုး ကြတော့မှာပါ။
ဘယ်အကြောင်းအရာတွေ ပါဝင်မလဲ ဆိုတာကိုလည်း အမေရိကန် တို့ ဘက် က ထုတ်ဖော် ပြောကြားလာဖို့ ရှိပါတယ်။
အစည်းအဝေး ခန်းထဲမှာတော့ ဒေါ်နယ် ထရမ့် လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ အတွက် သူကိုင်ဆောင်နေကြ ဘောပင်က အသင့်နေရာယူထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
သဘောတူညီမှုတွေကို လက်မှတ် ရေးထိုး ကြတော့မှာဖြစ်
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 6:17 ၁၂ ဇွန်
အာဏာရှင် မြောက်ကိုရီးယား ကို တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု
ဒေါ်နယ် ထရမ့် နဲ့ ကင်ဂျုံအွန်း တို့ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ ကို ကြည့်မယ် ဆိုရင်၊ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာ၊ နိုင်ငံ အလံတွေ စီကာစဉ်ကာ ချထားတာ၊ ပြီးတော့ ခေါင်းဆောင်တွေ အတွက် ထိုင်ခုံတွေ ကို စီစဉ်ချထားတာတွေက ပုံမှန် ဆက်ဆံရေး ရှိကြတဲ့ နိုင်ငံ ၂ နိုင်ငံ က ခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့ဆုံကြတာနဲ့ အလားသဏ္ဍန် တူပါတယ်။
ဒါကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် မြောက်ကိုရီးယား အာဏာရှင် စနစ် ကို ဒီမိုကေရစီ ရင့်ကျက်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ အမေရိကန် က တရားဝင် အသိအမှတ် ပြု တာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဝေဖန် သုံးသပ်မှု တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
ပုံမှန် ဆက်ဆံရေး ရှိကြတဲ့ နိုင်ငံ ၂ နိုင်ငံ က ခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့ဆုံကြတာနဲ့ အလားသဏ္ဍန် တူ
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 5:58 ၁၂ ဇွန်
နှစ်ယောက်ကြား သဘောတူညီမှု ရလို့ ထရမ့်ပြော
သူတို့ နှစ်ယောက် ကြားမှာ သဘောတူညီမှု ရခဲ့တယ်လို့ ဒေါ်နယ် ထရမ့် က ပြောပါတယ်။
မကြာခင်မှာ ကြေညာဖို့ ရှိပြီး ဘာ ကိစ္စ လဲ ဆိုတာ ကိုတော့ ဒေါ်နယ် ထရမ့် က ပြောဆိုခြင်း မရှိပါဘူး။
အားလုံး မျှော်လင့် ထားတာထက် ကို ပိုကောင်း တဲ့ ကိစ္စ လို့တော့သူက ပြောပါတယ်။
အားလုံး မျှော်လင့် ထားတာထက် ကို ပိုကောင်း တဲ့ ကိစ္စ
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 5:47 ၁၂ ဇွန်
သမိုင်းဝင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးနောက် သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရမ့် နဲ့ မစ္စတာ ကင်ဂျုံအွန်း တို့ ဟာ နေ့လယ်စာ အတူ စားခဲ့ကြပါတယ်။
အခု လောလောဆယ်မှာတော့ ကာပယ်လာ ဟိုတယ် က ပန်းခြံထဲမှာ နှစ်ယောက် အတူ လမ်းလျှောက် နေပါတယ်။ ဒါပြီးရင် လက်မှတ်ရေးထိုးမယ်လို့ ဒေါ်နယ်ထရမ့် က သတင်းထောက် တွေကို ပြောပါတယ်။
ဘယ် ကိစ္စ ကို လက်မှတ်ထိုးမှာလဲ ဆိုတာကိုတော့ ပြောဆိုခြင်း မရှိပါဘူး။
ဒါပြီးရင် လက်မှတ်ရေးထိုးမယ်လို့ ဒေါ်နယ်ထရမ့် က သတင်းထောက် တွေကို ပြော
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 5:36 ၁၂ ဇွန်
တောင်ကိုရီးယား ကလည်း ဆွေးနွေးပွဲ ကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်
စင်္ကာပူ မှာ တွေ့ဆုံ နေကြတဲ့ အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရမ့် နဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအွန်း တို့ရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကို တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ မွန်ဂျေအင်း နဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်း စောင့်ကြည့် ခဲ့ကြပါတယ်။
အခု ဆွေးနွေး ပွဲ ကနေ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိပြီး တောင်နဲ့ မြောက် ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံ အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်တွေ ယူဆောင် လာမယ်လို့ မျှော်လင့် ကြောင်း တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ မွန်ဂျေအင်း က ပြောဆို ခဲ့ပါတယ်။
တောင်နဲ့ မြောက် ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံ အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်တွေ ယူဆောင် လာမယ်လို့ မျှော်လင့်
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 4:59 ၁၂ ဇွန်
လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ မဆွေးနွေးဖြစ်
မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် နဲ့ အမေရိကန် သမ္မတ တို့ရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲ မှာ မြောက် ကိုရီးယား နိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ အကြောင်း ဆွေးနွေး မယ့် အစီအစဉ် ကို ထည့်သွင်း ထားခြင်း မရှိပါဘူး။
ဒီအကြောင်းပြောရင် ကင်ဂျုံအွန်း က ဆိုးဆိုးရွားရွား တုံ့ပြန်လေ့ ရှိတာကြောင့် လို့ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံ ဘူဆန် တက္ကသိုလ် က ပါမေက္ခ ရောဘတ် ကယ်လီ က ဆိုပါတယ်။
သိပ်မကြာခင် တုန်း က လုပ်ခဲ့တဲ့ ဆွေးနွေး ပွဲတွေမှာလည်း ဒီအကြောင်း ကို အမေရိကန် တို့ အနေနဲ့ ဆွေးနွေးခွင့် မရခဲ့ပါဘူး။ ဆိုတော့ အမေရိကန် တို့ က လူ့အခွင့်အရေး ကိစ္စ ကို ခေတ္တ ဘေးချိတ် ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်း တွေရဲ့ တောင်ဆိုး မှုတွေက အများအပြား ရှိနေပြီး မကြာခင် မှာတော့ ဒီကိစ္စ ကို မြောက်ကိုရီးယား နဲ့ မဖြစ်မနေ ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်မယ်လို့ လေ့လာ သူတွေက သုံးသပ်နေပါတယ်။
၁၉၅၀-၅၃ ခုနှစ် ကိုရီးယား ကျွန်းဆွယ် စစ်ပွဲတုန်း က ကွဲကွာ ခဲ့ကြတဲ့ မိသား စုတွေ ပြန်လည် ပေါင်းစည်း ရေး အတွက် လာမယ့် ဩဂုတ်လ ကျရင် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်မှာ ဝေးကွာ ခဲ့ကြတဲ့ မိသားစုတွေ ပြန်လည် တွေဆုံပွဲ ကျင်းပမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကိုရီးယား စစ်ပွဲ အတွင်း ကွဲကွာ ခဲ့ကြတဲ့ မိသား စုတွေ ပြန်လည် ပေါင်းစည်း ရေး အတွက် လာမယ့် ဩဂုတ်လ ကျရင် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်မှာ ပြန်လည် တွေဆုံပွဲ ကျင်းပမယ်လို့ သိရ
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 4:27 ၁၂ ဇွန်
သမိုင်းဝင် ၃၈ မိနစ်
မစ္စတာ ထရမ့် နဲ့ မစ္စတာ ကင် တို့ နှစ်ယောက် ဟာ ၃၈ မိနစ် ကြာ သီးသန့် တွေ့ဆုံ ခဲ့ကြတယ်လို့ အိမ်ဖြူတော် ဘက် က အတည်ပြု ပြောဆို ပါတယ်။
စကားပြန် နဲ့ ပြောကြဆိုကြတာ ဆိုရင်တော့ ဒါက အင်မတန် တိုတောင်းတဲ့ တွေ့ဆုံမှု လို့ ဆိုရမှာပါ။
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 4:21 ၁၂ ဇွန်
လူမှု ကွန်ရက် မှာလည်း တွေ့ဆုံပွဲ အကြောင်းအရာ အပြောအဆိုများ
လူမှု ကွန်ရက် တွေမှလည်း ထရမ့် နဲ့ ကင်ဂျုံအွန်းတွေ့ဆုံတဲ့ အကြောင်းပဲ အပြောများ
လူမှု ကွန်ရက် မီဒီယာ တွေ ဖြစ်တဲ့ Twitter နဲ့ Facebook တို့မှာလည်း ဒေါ်နယ် ထရမ့် နဲ့ ကင်ဂျုံအွန်း တို့ တွေ့ဆုံ ကြတဲ့ သမိုင်းဝင် ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ အကြောင်းအရာတွေပဲ လွှမ်းမိုး ထားပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံသား တွေကလည်း Twitter လူမှုကွန်ရက် ကို သုံးနေကြပါပြီ။ သူတို့လည်းပဲ အခု ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ အကြောင်း အရာ ကို ပဲ ပြောဆို နေကြတာပါ။
မြောက်ကိုရီးယား တွေလည်း twitter အသုံးပြု ပြောဆိုနေကြ
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 3:54 ၁၂ ဇွန်
ပြီးခဲ့တဲ့လ တောင်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့တုန်းကတော့ အစားအသောက်၊ ခုံနေရာချပုံ၊ အခန်းထဲက အရောင်၊ စိုက်မယ့် သစ်ပင်၊ အားလုံးကို အချိန်ယူ စနစ်တကျပြင်ဆင်ရွေးချယ်ပြီး လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ အဲဒါမျိုး လုပ်ထားကြောင်း ကြေညာတာ မကြားရပါဘူး၊
သမ္မတထရမ့်ကတော့ သူ ကင်ဂျုံအွန်နဲ့အတူထိုင်ပြီး ဘာဂါစားချင်ပါတယ်လို့ ၂၀၁၆ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ကာလတုန်းက ပြောခဲ့ဖူးတာရှိပါတယ်။
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 3:05 ၁၂ ဇွန်
အဖွဲ့လိုက် ဆွေးနွေးပွဲတွေ စပြီ။
နှစ်ယောက်ထဲ သီးသန့် ပြောဆိုမှုတွေ ပြီးသွားလို့ နှစ်ဘက်က အရာရှိကြီးတွေပါပါပြီး ဆွေးနွေးပွဲတွေ စနေပါပြီ။
ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေ အမေရိကန်ဘက်က လိုလားသလို မြောက်ကိုရီးယားက နျူလက်နက်တွေ လုံးဝ ဖျက်သိမ်းပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ သဘောတူညီချက်မျိုး ရနိုင်မှာလား။
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 2:54 ၁၂ ဇွန်
တစ်ကမ္ဘာလုံးက စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ တွေ့ဆုံပွဲကို စိတ်အလှုပ်ရှားဆုံးကတော့ ကိုရီးယားလူမျိုးတွေ ကိုယ်တိုင်ပါပဲ၊ ဒီမှာတော့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု လော့စ်အိမ်ဂျလိစ်မြို့နေကြတဲ့ ကိုရီးယားတွေက တောင်နဲ့ မြောက်နှစ်နိုင်ငံပေါင်းစည်းရေး သင်္ကေတမြေပုံရှေ့မှာ အောင်ပွဲခံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 2:41 ၁၂ ဇွန်
ပထမဆုံး ဆုံဖြစ်တဲ့ အခိုက်အတန့်ကလေးများ
အပြန်အလှန် စွပ်စွဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသူ ၂ ယောက်ဆုံဖြစ်ကြတဲ့ အခါ
ကဲ ပြောစရာရှိတာတွေလည်း ပြောကြတာပေါ့
ကင်မရာတွေ အားလုံးရှေ့မှာ မြင်ရတဲ့ အခိုက်
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 2:24 ၁၂ ဇွန်
ခေါင်းဆောင် ၂ ယောက်ဟာ စကားပြန်တွေပဲ ပါပြီး ၄၅ မိနစ်လောက် သီးသန့် ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ယောက် စပြီး တွေ့တွေ့ချင်းမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင် သိပ်မကြည့်ကြပဲ ကင်ဂျုံအွန်းဆိုလည်း မသက်မသာဖြစ်နေသလို ပုံစံမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ ၄၅ မိနစ်ဆိုတဲ့ အချိန်ဟာ ဘာသာစကားတူတဲ့ လူချင်းကြားမှာတောင် အများကြီး ပြောစရာ အချိန်မရတဲ့အတွက် စကားပြန်ကတဆင့်ပြောကြရတဲ့ အခါ ဘယ်လောက် အောင်မြင်အောင် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနိုင်မလဲလို့ ထောက်ပြကြတာလည်း ရှိပါတယ်။ သမ္မတထရမ့်ကတော့ အခု ဆွေးနွေးပွဲက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သိကျွမ်းအောင်လုပ်ကြဖို့ ကနဦးခြေလှမ်းလို့ ပြောထားပါတယ်။
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 2:13 ၁၂ ဇွန်
ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ တစ်ချိန်က ထင်မှတ်ထားခဲ့ကြတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို စင်္ကာပူနိုင်ငံ စန်တိုဆာကျွန်းပေါ်က ကပဲလားဟိုတယ်ထဲမှာ တွေ့ခဲ့ကြရပါပြီ။ လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ အမေရိကန် သမ္မတနဲ့ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်တို့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကင်နဲ့ ထရမ့်တို့ရဲ့ နှုတ်ဆက်ချိန်
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 1:52 ၁၂ ဇွန်
ကင်နဲ့ ပါလာတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား မီဒီယာ
ကင်ဂျုံအွန်းရဲ့ ယာဉ်တန်းနဲ့အတူ မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရ မီဒီယာက သတင်းသမားတွေလည်း လိုက်ပါလာကြပြီး သတင်းယူ မှတ်တမ်းတင်နေကြတာပါ။
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 1:36 ၁၂ ဇွန်
အားလုံး စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း အချိန်အတိအကျနဲ့ စတင်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ သမ္မတထရမ့်ကားက အရင်ထွက်လာတာဖြစ်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ ကင်ဂျုံအွန်းရဲ့ မော်တော်ယာဉ်တန်းကလည်း ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ခေါင်းဆောင် နှစ်ယောက်စလုံး ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမယ့် စင်တိုဆာကျွန်းပေါ်က ကပဲလားဟိုတယ်ကို ရောက်ရှိသွားကြပါပြီ။
ဆွေးနွေးပွဲရှိရာကို ထွက်လာနေတဲ့ ကင်ဂျုံအွန်း
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 1:23 ၁၂ ဇွန်
အရင်တုန်းက အမေရိကန်သမ္မတတွေ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်နဲ့ တွေ့ခဲ့ဖူးလား
သမ္မတဟောင်း ဂျင်မီကာတာနဲ့ ဘီလ်ကလင်တန်တို့ မြောက်ကိုရီးယားကို သွားပြီး ကင်ဂျုံအွန်းရဲ့ အဖေ ကင်ဂျုံအီးလ်နဲ့ တွေ့ခဲ့ဖူးကြပါတယ်။ ၁၉၉၄ နဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကာတာရော ကလင်တန်ပါ အဲဒီအချိန်တွေမှာ သမ္မတတွေ မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အခုတွေ့ဆုံပွဲဟာ မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်က လက်ရှိ အမေရိကန်သမ္မတနဲ့ ပထမဆုံး တွေ့ဆုံတာလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 1:08 ၁၂ ဇွန်
သမိုင်းဝင်ဆွေးနွေးပွဲစတင်ဖို့အတွက် သမ္မတထရမ့် တည်းခိုရာ ရှန်ဂရီလာဟိုတယ်ကနေ စင်တိုဆာကျွန်းဆီကို သွားနေပါပြီ။
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 1:05 ၁၂ ဇွန်
တစ်နာရီတောင်မကြာတော့မယ့်အချိန် စတင်တော့မယ့် သမိုင်းဝင်တွေ့ဆုံပွဲကို မှတ်တမ်းတင် သတင်းရယူဖို့ သတင်းထောက်တွေ အများကြီး ဆွေနွေးပွဲကျင်းပမယ့် စင်တိုဆာကျွန်းပေါ်က ကပဲလားဟိုတယ်ရှေ့မှာ ရောက်ရှိစောင့်စားနေကြပါပြီ။
သတင်းထောက်တွေကစောင့်၊ လုံခြုံရေးတွေကလည်း စောင့်
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 0:58 ၁၁ ဇွန်
ဆွေးနွေးပွဲကနေ မြောက်ကိုရီးယားတွေ လိုချင်တာက ...
အခုတွေ့ဆုံပွဲကနေ မြောက်ကိုရီးယားက ဘာတွေ ရဖို့ မျှော်လင့်နေပါသလဲ။အဖြစ်နိုင်ဆုံး ၃ ခုကတော့ ၁။ လုံခြုံရေး - ခေါင်းဆောင်တွေအန္တရာယ်ကင်းရေးနဲ့ နိုင်ငံတည်တန့်ရေး၊၂။ တန်းတူ ဆက်ဆံမှုရှိရေး - မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်တွေက သူတို့ကို ကမ္ဘာက နှိမ်ချဆက်ဆံနေတယ်လို့ ယူဆထားလို့ သူတို့အပေါ် လေးစားမှုပြတာကို လိုလား၊၄။ ကြွယ်ဝချမ်းသာရေး - ကင်ဂျုံအွန်းတက်လာတဲ့အခါ တိုင်းပြည်ကို ချမ်းသာကြွယ်ဝအောင် လုပ်ပေးမယ်လို့ ပြောထား၊ နိုင်ငံတကာရဲ့ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေ ဖယ်ရှားပေးစေချင်
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 0:30 ၁၁ ဇွန်
မြောက်ကိုရီးယား သတင်းစာတွေရဲ့ မျက်နှာဖုံးမှာ
ထူးခြားတဲ့ အပြောင်းအလဲတစ်ခုကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကတော့ နိုင်ငံပိုင် ရိုဒေါင်ဆင်မွန်သတင်းစာမှာ စင်္ကာပူမှာ ကင်ဂျုံအွန်း ညဘက်လှည့်လည်ကြည့်ရှုနေတဲ့ပုံကို ဖော်ပြထားပြီး စင်္ကာပူဟာ သန့်ရှင်း သပ်ရပ်ပြီး အဆောက်အဦတိုင်းဟာလည်း သူ့ တစ်ကိုယ်ရေ အဓိပ္ပါယ်ရှိကြတယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့ အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
သူက စင်္ကာပူဝန်ကြီးတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်း စင်္ကာပူဆီက အတွေ့အကြုံတွေကို လေ့လာသင်ယူချင်တယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
စင်္ကာပူဆီက သင်ယူစရာရှိတယ်လို့ ကင်ပြော
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 0:16 ၁၁ ဇွန်
မကြာခင် သိရတော့မယ်လို့ ထရမ့်ပြော
ပြီးခဲ့တဲ့ နာရီပိုင်းကပိုင်း သမ္မတထရမ့်က ထုံးစံအတိုင်း သူ့ရဲ့ တွစ်တာကနေ မက်ဆေ့ချ်တွေတင်ခဲ့ပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ အမေရိကန် နှစ်ဘက် အရာရှိတွေ ဆွေးနွေးပွဲက လျင်လျင်မြန်မြန်ပဲ တိုးတက်မှုတွေရနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေဟာ အရေးမကြီးပါဘူး၊ တကယ့် သဘောတူညီချက်၊ အရင်တုန်းကနဲ့ မတူတဲ့ သဘောတူညီချက်တစ်ခုခု ရမရဆိုတာ မကြာခင်မှာပဲ သိရတော့မှာပါလို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ သမိုင်းဝင်တွေ့ဆုံပွဲက စင်္ကာပူစံတော်ချိန် မနက် ၉ နာရီဆိုတော့ ၂ နာရီလောက်ပဲ လိုပါတော့တယ်။
Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn’t matter. We w… twitter.com/i/web/status/1…
9:27 p.m. - 11 June 2018
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 0:06 ၁၁ ဇွန်
ထရမ့်ကို မွေးနေ့ ကိတ်ပေးတဲ့ စင်္ကာပူဝန်ကြီးချုပ်
တနင်္လာနေ့ကတော့ စင်္ကာပူဝန်ကြီးချုပ် လီရှန်လွန်းက သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကို နေ့လယ်စာနဲ့ ဧည့်ခံရင်း လာမယ့်ကြာသပတေးနေ့မှာ ကျရောက်မယ့် မစ္စတာထရမ့်ရဲ့ မွေးနေ့အတွက် ကိတ်မုန့်တစ်လုံးကို ပေးခဲ့ပါတယ်။
သံရေးတမန်ရေး အဆက်အသွယ်တွေ အမျိုးမျိုးကြားမှာ ဒါကလည်း ကိတ်မုန့် ဒီပလိုမေစီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
မွေးနေ့ကိတ်နဲ့ အတူတွေ့ရတဲ့ ထရမ့်
ပို့စ် တင်တဲ့အချိန် 0:01 ၁၁ ဇွန်
တနင်္လာနေ့ညက စင်္ကာပူမှာ ကင်ဂျုံအွန်းကို လိုက်လံပြသနေတဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဗီဗီယန် ဘယ်လာကရစ်ရှနန်က အတူတွဲပြီး ဆယ်လဖီရိုက်နေတဲ့ပုံ၊ အဲဒီပုံကို နောက်တော့ ဝန်ကြီးက သူ့တွစ်တာမှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။
ကင်ဂျုံအွန်းနဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ရဲ့ ဆယ်လဖီ
နောက်ဆုံး ပို့စ်တွေ ထပ်ကြည့်ရန်